माइक्रोस्टेशन गुगल अर्थको साथ सिंक्रोनाइज गर्नुहोस् - जिओफुमाडास
अप्रिल, 2014 cadastre, गुगल अर्थ / नक्सा, Microstation-बेन्टले
गुगल अर्थ हाम्रो वर्तमान म्यापि processes प्रक्रियामा लगभग अपरिहार्य उपकरण भएको छ। यद्यपि यसको सीमितता र यसको सहजताको फलहरू छन्, प्रत्येक दिन तिनीहरू टिप्पणी गरिन्छन् धेरै प्रशोधनहरू, यो उपकरणमा हामी निश्चयौं कि नक्सामा भूस्थान र नेभिगेसन आजकल लोकप्रिय छ। त्यसैले हामी पेशेवर सेवाहरूको लागि थप माग छ।
यस उद्देश्यको लागि, माइक्रोस्टेशनको 8.9 संस्करणबाट, बेन्टलेले एक कार्यक्षमतालाई एकीकृत गरेको छ जुन Google उपकरण परिनियोजनको साथ नक्साको दृश्य समक्रमण गर्न आधारभूत उपकरणहरू समावेश गर्दछ।
आउनुहोस् कसरी यो काम गर्दछ:
१. प्रोजेक्शन र सन्दर्भ प्रणाली फाईलमा तोकिनु पर्छ।
माइक्रोस्टारेशनले तपाईंलाई मूल रूपमा DWG, DGN र DXF ढाँचाहरूमा फाइलहरू सिर्जना र सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ; जेस प्रणालीले कल गर्दा यी georeferences छैन। कम से कम एक मानकमा होईन जुन सीएडी फाईलहरूको लागि मान्यता दिइएको हो, यस तथ्यलाई बावजुद आन्तरिक कार्यक्रमहरू छन् भौगोलिकता.
गुगल अर्थमा CAD फाइलको भूगोलत्व असाइन गर्न, यो कार्यान्वयन गरिएको छ:
उपकरण / ज्योतिषीय / ज्योतिषीय।
यो पट्टी भित्र त्यहाँ एक विशिष्ट आइकन छ «भौगोलिक समन्वय प्रणाली चयन गर्नुहोस्«। यहाँबाट हामी चयन गर्छौं, यस अवस्थामा, प्रोजेक्ट प्रणाली: वर्ल्ड यूटीएम, डाटा: डब्लूजीएस and84 र त्यसपछि जोन, जुन हाम्रो केसमा १ northern उत्तरी गोलार्ध हो।
यो कन्फिगरेसन प्रत्येक चोटि आवश्यक नहुँदा क्रममा कल नगर्न, म दायाँ क्लिक गर्न र यसलाई मनपर्नेमा थप्न सक्दछु। यसै मनपर्दो फोल्डरमा माथि देखा पर्दछ।
यसका साथ, डीजीएन पहिले नै प्रक्षेपण छ र प्रणाली को समन्वयन गर्दछ।
गुगल अर्थमा फाईल पठाउनुहोस्।
यो बटनसँग गरियो Google Google अर्थ (KML) फाइल निर्यात गर्नुहोस्। यो एकदम कुशल छ, प्रणाली केवल नाम र कहाँ बचत गर्न को लागी सोध्छ, र यसले स्वतः गुगल अर्थ लाई वस्तुको साथ उठाउँदछ; स्थान दृश्य भएको मामला मा, यो दृष्टि गुमाए बिना प्रकट हुन्छ। यदि यो किलोमिटरको रूपमा बचत गरिएको छ भने, यसले सबै भेक्टरहरूको एकल फाईल सिर्जना गर्दछ, यदि यसलाई किमीटिजको रूपमा बचत गरिएको छ भने यसले प्रत्येक तहको लागि फोल्डरहरू सिर्जना गर्दछ; दुबै केसमा यसले प्रतीकात्मकता संरक्षण गर्दछ, यसले थ्रीडी वस्तुहरू पनि निर्यात गर्दछ।
परिवर्तन गर्नको लागी, हामी मात्र पुन: निर्यात गर्न छनौट गर्दछौं, र गुगल धरती प्रश्न सोध्न चाहन्छौं कि हामी फाइल बदल्न चाहन्छौं।
Google धरतीको साथ तपाईंको दृश्य सिङ्क गर्नुहोस्
अब सबै भन्दा राम्रो आउँछ। तपाईं माइक्रोस्टेशनबाट, Google लाई माइक्रोस्टेशनमा भएको दृश्यको साथ प्रदर्शन समक्रमण गर्न सोध्नुहोस्। उत्कृष्ट
यसको अतिरिक्त, हामी व्युत्पन्न गर्न सक्छौं, माइक्रोसेशनको दृश्य कुन Google धरती देखाइएको छ संग सिंक्रोनाइज गरिएको छ।
नराम्रो छैन, धेरै मामलाहरुमा विचार गरिरहेको क्षेत्रको कुनै छवि हो जहाँ तपाईं काम गरिरहनु भएको छ, वा तपाइँ अघिल्लो वर्षका फोटो फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित गुगल अर्थ जानकारीको फाइदा उठाउन चाहानुहुन्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सर्वेक्षण उपकरणको सुरक्षाका लागि5सिफारिसहरू
अर्को पोस्ट Microstation बाट WMS सेवाहरू कल गर्नुहोस्अर्को »